“Iska suga Juventus iyo Ronaldo waxay doonayaan ku guuleysiga Champions League”… Trezeguet – Gool FM
“Iska suga Juventus iyo Ronaldo waxay doonayaan ku guuleysiga Champions League”… Trezeguet
Dajiye September 6, 2018
(Juentus) 06 Sab 2018. Halyayga kooxda Juventus iyo xulka qaranka France ee David Trezeguet ayaa xaqiijiyay in ay tahay wax adag ku guuleysiga koobka Champions League.
Laakiin David Trezeguet ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyay in Bianconeri ay awoodo xili ciyaareedkan ku guuleysiga tartanka Champions League, kadib heshiisyadii ay ka sameesay suuqii xagaaga uu hogaaminayo Cristiano Ronaldo.
“Juventus waxay dooneysaa inay ku guuleysato Champions League inkastoo aysan sahlaneen, sidoo kale kooxaha kale ee dhan ayaa bar-tilmaameed ka dhiganaya inay sidaas sameeyaan”.
“Laakiin Juventus waxay sameesay horumar, waxaa la maalgaliyay kooxda suuqii xagaaga, si ay guulo muhiim ah u gaarto xili ciyaareedkan, taasi waxay u fiican tahay kooxda kooxda, shaqaalaha, ciyaartoyda iyo taageerayaasha”.
“Ma awoodo in aan talooyin u diro laacib sida Cristiano Ronaldo oo kale, wuxuu kasoo ciyaaray tartamo kala duwan sida Spain iyo England, wuxuu ka war qabaa saaxiibada cusub iyo nidaamka cusub”.
“Cristiano Ronaldo waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, laakiin wali waxaa ka maqan fahamka ciyaartoyda iyo waxa uu tababaraha doonayo”
“Xiliyadan oo kale kaliya waxaad u baahan tahay daganaan, Cristiano wuxuu la imaan doonaa goolashiisa xili dhow ama xili fog, sababtoo ah waa ciyaaryahan aad u wanaagsan ee cajiib ah”.
AFKA LAGAMA SHEEGTO ADIGOON JACEYL ARAG: Alexis Sanchez oo Hees Murugo leh daartay mar uu Shaacinayay in Gacalisadiisa...!!
Isco oo sheegay in Ronaldo uu yahay xidig wanaagsan, isagoo dhinaca kale ka jawaab celiyay hadal uu dhawaan sheegay Messi